सर्पले टोकेमा तत्काल के गर्ने ? कसरी घरमै अपनाउन सकिन्छ प्राथमिक उपचार, समयमै उपाचार नभए ज्यानै जान सक्छ ! जानी राखौ « Onlinetvnepal.com
Published : 20 April, 2019 10:28 pm
सर्प भन्ने बत्तिकै हामि झसँग हुन्छौ ।हामि झसँग हुनु पनि स्वभाबिक नै हो । किनकी यदि हामिलाइ सर्पले टोकेमा हाम्रो ज्यानै जान सक्छ । सर्प यति विषालु हुन्छकी यसको समयमै उपचार हुन नसके ज्यानै जान जान्छ।
हामिले वर्षातको समयमा सर्पले टोकेर ज्यानै गएको समाचारहरू धेरै सुन्र्दै आइरहेका छौ । रातको समयमा सर्प बढी देखा पर्दछन । यसको उपचार छिटो नहुदा कयौ मानिसले ज्यान गुमाएका पनि छन ।यस्तो अवस्थामा सर्पले डसेको एक मिनेटभित्रै शरीरमा भएका टाइट गहना र कपडा फुकाल्नुपर्छ ।
टोकेको टाउमा टाइट पट्टी बाँध्नुहुँदैन । जुन ठाउँमा सर्पले डसेको छ उक्त भागलाई मुटुको लेभलभन्दा तल राख्नुपर्छ । सर्पले टोकेपछि प्राय मानिसहरुले चुसेर विष निकाल्ने गर्दछन तर हामिले त्यस्तो चुसेर विष निकाल्ने प्रयास गर्नुहुँदैन ।त्यसैगरी यस्तो अवस्थामा चिया, कफी पिउने गर्नु हुदैन ।
जुन व्यक्तिलाई टोकेको छ । त्यस्तै अवस्थामा स्थिर राख्नुपर्छ । यस्तो गर्दा विष शरीरका अन्य भागमा फैलन पाउँदैन । साथै जुन ठाउँमा टोकेको छ उक्त ठाउँमा हल्का कपडाले छोप्नुपर्छ ।सर्पले टोकेको चार घन्टाभित्र एन्टिभेनमको इन्जेक्सन दिनुपर्छ ।